GUBASHOOYINKA TOONTA: FAA'IDOOYINKA, KALOORIYADA, HALABUURKA, GURYAHA DAWOOYINKA - GARLIC
Gawaarida Garlic: Sida Fiican ee Loogu Taaban Karo
Sallaar iyo fallaarro toon ah oo toon ah, isticmaalka kaas oo lagu taageeray cilmi ahaan, waa dad caan ah maaha oo kaliya cuntada cuntada, laakiin sidoo kale daawo ahaan. Sallaar iyo faa'iidooyinkeeda jidhka waxaa loo yaqaanaa dhammaanba dadka adduunka. Wadamo kala duwan, waxaa si wanaagsan loogu isticmaalay bogsashada iyo daaweynta tan iyo wakhtiyadii hore. Garlic waxay u adeegtaa sidii loo bedelay qaar ka mid ah talaal-qaadeyaasha, kordhinta jirka difaaca jidhka iyo ka hortagga hargabka, wadnaha, cudurrada fayraska.
Ma taqaanaa? Isticmaalka joogtada ah ee toonta ayaa hoos u dhigta dhacdooyinka sinusitis, rhinitis, sinusitis, faryngitis, boronkiitada, pneumonia oo ka sameysma noocyo kala duwan ah (oo ay sababtay microbes, cocci, viruses) xilliga dayrta-qaboobaha.
Waxyaalaha caloric iyo ka kooban ee toogashooyinka toon
100 g oo xariiq oo tufaax ah ayaa ku jira borotiinka - 1.2 g, dufan - 0.1 g, carbohydrates - 3.5 g Calories -25 kcal / 100 g. Sidoo kale waxaa ku jira qaybaha cagaarka ah fitamiin C, PP, D, A, B1, E, B2; sulfur, magnesium, chlorine, iodine, zirconium, manganese, vanadium, sodium, potassium, copper, fosfooraska, molybdenum, zinc, cobalt, titanium; asiidhyada dabiiciga ah, phytoncides, antioxidants, saliidaha lagama maarmaanka ah iyo walxaha kale ee bioactive.
Waa muhiim! Toonta yaryar iyo bislaanta ka hor intaadan cunin waxay ka fiicantahay inaadan kululayn daaweyn - tani waa sida qeybta oo dhan u gebi ahaanba loo ilaaliyo.
Sidee xayawaannada cagaarka leh loogu isticmaalo jidhka bini'aadamka?
Gacmaha dhagaxu waxay leeyihiin faa'iidooyinka isku midka ah sida toon-toon, hadana way ka fiicnaanayaan oo waxay leeyihiin dhadhan tartiib tartiib ah.
Gacmaha Toonta oo ka faa'iideysanaya meesha ugu horeysa? Isticmaalkooda waa hab la awoodi karo si looga hortago yaraanta vitamin, gaar ahaan guga, marka jirku u baahan yahay inuu buuxiyo fiitamiin ka dib jiilaalka. Sidoo kale, isticmaalka toonta loogu talagalay ujeedada daawada waxay xoojinaysaa rabitaanka cuntada, dhererka dheefshiidka, xakamaynta hababka hargabka ee xiidmaha iyo si xun u saameeya microflora putrefactive.
Ma taqaanaa? Sababtoo ah phytoncides ku jirta cagaaran - antiseptics dabiiciga ah, fallaaro toon ah iyo toon ayaa leh saameyn lid ku ah bakteeriyada.
Sida loo isticmaalo fallaarada toonka ah ee daaweynta xanuunka
Daawo dhaqameed ayaa muddo dheer ogaa faa'iidooyinka cagaarka. Sprouts ayaa had iyo jeer loo isticmaalay si kor loogu qaado difaaca oo caafimaadkana lagu ilaaliyo culeys badan oo jirka ah.
Gawaarida garabka ayaa saameyn togan ku leh shaqada wadnaha iyo xididdada dhiigga, kolestaroolka hoose ee dhiigga, waxay u fiican tahay hypotension, atherosclerosis, thrombosis, ka dib xanuunnada muddada dheer, waxay leeyihiin tayli, dib u soo nooleyn, dib u soo kabasho iyo dib u soo kabasho. Waxaa loo isticmaalaa walaaca, niyad-jabka, madax-xanuun badan oo aan la garaneynin, iyo jirrooyinka qaarkood. Waxaa jira caddayn ah faa'iidooyinka ay isticmaalaan si kor loogu qaado awoodda, dagaalka ka dhanka ah fara-gelinta helmin iyo cudurada fayowheerka.
Gacmaha Toonta waxaa loo isticmaalaa sida cusub, waxaana laga sameeyaa iyaga oo leh loons, malab, nuts, ku adkeyso khamriga, saliidda (saliidda), ama qaado caanaha iyo shaahyada dhirta.
Garlic wuxuu leeyahay qaabab daaweyn oo la yaab leh, laakiin sidoo kale waxa uu leeyahay contradindications, marka hore ka hor isticmaalida, waxaa faa'iido leh inay caddeeyaan, iyo xataa si fiican ula tasho dhakhtar.
Isticmaalka fallaaraha cagaarka ah ee karinta
Isticmaalka toonta waa qayb muhiim u ah cunto karinta. Cuntooyinka badankood waa kuwo aan macquul aheyn in la qiyaasi karo iyada oo aan dhadhanka toon lahayn iyo urta. Wixii karinta, xiirida toonta iyo foornada labadaba waa la isticmaalayaa. Waxaa lagu daraa suugada, saladhyada, joodariga, sanduuqyada, saxamada qabow iyo kulul, marinades, qasacadaysan, qalajiyey, qalajiyey, barafoobay.
Garlic waxaa lagu daraa khudrado badan, hilib, badeecado, kalluun, kalluun, iyo cuntooyin badiba. Tusaale ahaan, saladh kiniiniga kaabajka ah oo leh toonta ama toonta, ugxan leh saliidda cuntada ama labeen dhanaan, waa dhadhan fiican oo caafimaad leh.
Waa muhiim! Kaliya 2-3 koob oo toon ah oo toon ah ayaa loo qaataa cuntada, hababka dambe ma aha mid ku habboon cunista.
Caleemaha waxyeelada leh ee toonta iyo dhididka
Faa'iidooyinka iyo waxyeellada tufaaxa toonta ah waa fikrad qaraabo ah. Wax kasta oo faa'iido leh waxay noqon kartaa mid waxyeello u leh haddii aad dhaafto oo aad isticmaasho alaabada si xad dhaaf ah ama aan la xakameynin. Isticmaalidda xad dhaafka ah ee toonta ah ma aha mid ka reeban. Waxay u horseedaa dhibaatooyinka kelyaha, beerka, mareenka caloosha iyo mindhicirada - saameynta cuncunka ee derbiyada caloosha, mindhicirada, taas oo keenta dareen-celin iyo fal-celin xasaasiyadeed. Laakiin si qaas ah loo cuno si taxadar leh oo nidaamsan, faa'iidooyinka jidhka ayaa noqon doona mid la tixgeliyo.
Laakiin fallbooyinka tufaaxa waxay leeyihiin waxoogaa khilaaf ah: Uma isticmaali kartid dulqaad shakhsi ah jidhka, gaastritis joogto ah, cagaarshow, pankreatitis, boog-garka caloosha, 12 uloodal duugis, dhiigfuran, suuxdin. Isticmaalka waa in ay ahaataa mid dhexdhexaad ah xilliga uurka, iyo sida ay muujinayso in laga yaabo inay si buuxda uga reebaan cuntooyinka haweeneyda uurka leh iyo nuujinta.
Iyo, dabcan, waxaad u baahan tahay inaad tiraahdo erayo kooban oo ku saabsan urta. Ka dib markii la cuno toonta, u diyaari xaqiiqda ah in muddo waqti ah waxaa jiri doona kareem qaas ah oo ka yimaada afka. Laguma jari karo xanjo, nadiifinta ilkahaaga iyo talaabooyinka kale ee nadaafadda jirka - way iska baabi'i doontaa, laakiin dhowr saacadood ka dib.
Dhanka kale, riigsatada caleenta ah waxay yihiin wax soo saarka fiitamiin-macdanta ah oo qof walba heli karo oo faa'iido u leh jidhka, sidaas darteed go'aanka ayaa weli adiga kuu ah - inaad isticmaasho ama aanad isticmaalin.